Le Chant des Sirènes | Entprima Mozika sy bebe kokoa
Captain Entprima - Avoahana naoty, Famandrihana fanamarihana
Ny angano dia avy amin'ny angano grika, izay ahitan'ny tantsambo mariky ny fahafatesan'izy ireo ilay hiran'ny sirenan'ny sirenika.
Playify Playlist - Fahatoniana manerantany
Ampidiro indray ny baterinao hampiova ny tany ho planeta milamina. Ampahan'ny holistic Entprima foto-kevitra mozika.
Ny kanto mandanjalanja
Olom-pirenena mpitsikera ny planeta Tany ianao ary manahy ny amin'ny ho avy? Misy antony ampy mahatonga ireo ahiahy ireo. The Entprima Jazz Cosmonauts mihirà hira iray na roa momba an'io.
Saingy ny fitaintainana tsy tapaka dia mitarika fahatsapana fahakiviana ary manala anao ny hery hanoherana. Noho izany dia ilaina ny mamerina ny fanahy hiverina amin'ny fifandanjana.
Tsy famadihana ny tolona ho an'ny tontolo milamina raha mahita fandriampahalemana anaty ianao, na dia manjakazaka matetika aza ny zava-dratsy. Ny feo mahery maharitra ihany no afaka manova zavatra amin'ny fotoana maharitra.
Izahay tsy mandevina ny lohantsika amin'ny fasika, fa te hanome mozika anao ho amin'ny fifandanjan'ny fanahy izahay.
Ny aingam-panahy ho an'ity hira ity dia avy amin'ireo zavaboary angano avy amin'ny angano grika, izay ao an-trano ao amin'ny nosy iray ary mitaona ireo tantsambo hanao hira mamitaka, mba hamonoany azy ireo fotsiny. Hira roa samy hafa no re, arahin'ny diabe fandevenana ireo tantsambo maty. Amin'ny faran'ny dia maneno ny knell.
Ny teboka niandohan'ny fisaintsainana dia ny fanontaniana tsotra momba ny famoronana feon-kira kanto sy kanto. Koa satria Captain EntprimaNy programa dia ny mozika mampitony, ny toerana misy ny feo koa nilalao andraikitra lehibe. Mazava ho azy fa ny zavaboary angano dia mampiasa izay fomba rehetra azo atao mba hahatratrarana ny tanjon'izy ireo. Ny feo elektronika dia ho zava-tsarobidy tokoa amin'ny sirenika ankehitriny, ary rehefa dinihina tokoa, Captain Entprima dia karazana zavaboary angano ihany koa.
Na dia mitovy amin'ny biby goavam-be aza ny kiririoka amin'ny angano, dia voafetra ihany ny tanjontsika amin'ny fitiavana, noho izany dia tsara tarehy lavitra ny sirenantsika.
Fanahy manadio rivotra
Henoy ary tsapao ny rivotra izay manadio ny fanahy. Afangaro miaraka amin'ny feo mozika izay manafana ny fo.
Ny Blue Cavern
Mahatsapa ny mazia amin'ny lava-bato lava miaraka amin'ny feon'ny rano mitete sy ny feo majika.
Ahoana no hanarahana anay
Ny vaovao tena manan-danja dia omena ho toy ny teaser avy amin'ity tranonkala ity hatrany amin'ireo tambajotra voalaza etsy ambony, mba hahafahanao misafidy ny tambajotra tianao hanaraka anay. Miaraka amin'ny rohy amin'ity tranonkala ity dia manolotra ny zavatra rehetra amin'ny fiteny maro izahay. Ho fampahalalana bebe kokoa dia azonao atao ny misoratra anarana amin'ny mailakao.